မာဆက်(KTV) မီးရောင်စုံအောက်က မြန်မာမိန်းခလေး ဘ၀ | Danya Wadi
»သတင်းများ»မာဆက်(KTV) မီးရောင်စုံအောက်က မြန်မာမိန်းခလေး ဘ၀
မာဆက်(KTV) မီးရောင်စုံအောက်က မြန်မာမိန်းခလေး ဘ၀
Posted by danyawadi on February 3, 2013 in သတင်းများ
KTV ၊ (မာဆက်) အနှိပ်ခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် များတွင် လှည့် လည် ဖျော်ဖြေ ရေးး အသွင်ဆောင်နေကြတဲ့ မော်ဒယ် မလေးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်..၊အဆိူ ပါမိန်းကလေးများမှာ များသောအားဖြင့်ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ကြသူ များဖြစ်ကြ ပါ တယ်။အလွှာ အသီးသီးမှ ဆင်းသက်လာကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်..၊သူတို့ကျင်လည် ရာ နေရာများ ကတော့…စားသောက်ဆိုင် အမည်ခံ ကာရာအိုကေခန်းများ၊ အလှပြင်ဆိုင်အမည် ခံအနှိပ်ခန်း များ. .စင်တင်တေးဂီတ အမည်ခံ မော်ဒယ်မလေးများ ထားရှိသောဆိုင်များဖြစ်ကြပါသည်..။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မိန်းကလေးတို့သဘာဝ အလှတရားများကို ဗန်းပြကာငွေ ရှာ ကြသောနေရာများဖြစ်ပါသည်..။
ပထမဦးစွာတင်ပြမှာက ကာရာ အိုကေခန်းမများ..တွင် ကျင်လည်ကြသော မိန်းကလေးများ၏ ဘ၀ အကြောင်းဖြစ် ပါသည်..။
ထိုမိန်း ကလေးများသည်အသက်အားဖြင့်(17 နှစ်မှ30)၀န်းကျင်သာရှိကြပါ သည်။ထို မိန်းကလေးများ ရုပ်ရည် အ တန်သင့်ရှိကြပြီးပညာရေးအနေနှင့်တော့အချို့ က အခြေခံအဆင့်အချို့ကတော့တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်း တက်ဆဲ မိန်းကလေးများပါ ပါဝင် ပါသည်။ပထမနှစ်..ဒုတိယနှစ်ကျောင်း သူများပါဝင်နေကြမှာထူးခြားမှု့တခု ဖြစ်ပါ သည်..။သူတို့၏ပြောဆိုချက် အရ ပညာဆက်လက် သင်ရန် အတွက် ငွေကြေးမပြည့် စုံခြင်း၊မိဘများမှ စီးပွားရေးကျပ် တည်းလာမှု့ကြောင့်ကျောင်းစရိတ် ဆက်လက်မပံ့ပိုးနိုင်တော့ခြင်းတို့ကြောင့်ပညာအတွက် ဘ၀ ကို နှစ်ကြ သူများ ဖြစ် ပါသည်။ ထိုမိန်းက လေး မျိုးသည်များသောအားဖြင့်အလုပ်သဘော ဆက်ဆံ မှု့ မှလွဲရ်ျလူသိမခံကြပါ ။နောက်ထိုအထဲတွင်အများဆုံး ရောက်ရှိလာကြသူများကတော့ယခင်အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း များတွင် နယ်မှနေရ်ျ လာရောက်လုပ်ကိုနေကြသည့်အထည် ချုပ် သမ လေးများဖြစ်ပါသည် ။ပြည်ပ မှလာရောက်လုပ် ကိုင်ကြသော အထည် ချုပ်လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံရေးအခြေနေအရသော်၎င်း ၊အစိုးရ၏စီပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်များ အပေါ်သဘော ထားပြောင်း လဲလာခြင်းကြောင့်သော်၎င်း၊လျှပ်စစ် မီးသုံးစွဲရာတွင်လုံ လောက်စွာမရရှိမှု့ ကြောင့် သော်၎င်း အကြောင်း အမျိုး မျိုးကြောင့်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းခဲ့ ကြပါသည်..။
ထိုအခါတွင် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများမှမိန်းကလေးတော်တော်များများအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်..။ ထိုမိန်းကလေး များ သည်မိမိ ဘ၀ ရပ်တည်ရေး နှင့် အခြားအလုပ်များပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရှားပါးမှု့တို့ကြောင့်အ၀င်လွယ် အထွက် လွယ်ငွေရလွယ်သော ကာရာအိုကေခန်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရင်း ယခုတိုင်ရုန်း မထွက်နိုင်သူအများအပြားရှိနေ ကြ ပါသည် ။ နေထိုင်ကြသည့်ပုံစံများကတော့အလျှင်းသင့်သူများနှင့်တိုက်ခန်း များစပ်တူဌားရမ်း နေထိုင်ကြခြင်း၊ဆိုင်များမှစီစဥင်္ပေးသောအဆောင်များတွင်နေထိုင်ကြခြင်းများစသည်ဖြင့် နေ ကြ ပါသည်။စားရေးသောက်ရေးအနေနှင့်ကတော့မနက်ခင်းပိုင်းတွင်မိမိငွေဖြင့် ဝယ်စားညစာ အတွက်မူ လာ ရော က် ကြ သောဧည့်သည် များထံမှကျွေး သမျှ ဖြင့်ချို့ချန် ကာ ရသမျှ ငွေ ကိုစုပြီး အဝေးမှမိဘ များကိုထောက် ပံ့ ကြပါသည် ။
အလုပ်ချိန်မှာ ညနေ(5း00)လောက်မှစတင်ကာည(2း00)လောက်ထိရှိကြပါသည် ။ထိုဘ၀များတွင် ကြာရှည် ကျင်လည် ခဲ့ ကြသည့်မိန်းကလေးအများစု မှာ ကျင်လည်ရာပါတ်ဝန်းကျင် ၏ရိုက်ခတ်မှု့ကြောင့်စိတ်အလိုလိုက်ရင်း အရက်စွဲ ၊ကြေးစားဘ၀ ၊ငွေ ကြေးချမ်းသာသူများ၏လပေးစနစ်ဖြင့်အငယ်အနှောင်းဘ၀များဖြင့်သာနိဂုန်းချုပ်ရပါတော့သည် ။
ထိုလုပ်ငန်းများသည် ယခင်က မြို့ကြီးများဖြစ်ကြသော ရန်ကုန် ၊မန္တလေး ၊မော်လမြိုင်စသော မြို့ကြီးများတွင် အဓိ က ဈေးကွက် ဖြစ်ခဲ့ သော်လည်း ယခုအခါတွင် ရုံးဌာန များ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရာ နေပြည်တော် တွင် ဆိုင်များ တိတ်တိတ်ပုန်းတိူးချဲ့ ကာအောင် ပွဲ ခံ လျှက်ရှိ်နေပါသည် ။
ဒီဆောင်းပါလေးအား သင်ဖတ်ပြီးရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာ အမျိုး သမီးမိန်းကလေးတွေ ရဲ့ ဘ၀ ကိုယ် ကယ် တင်ပါ
← ဒု ၊ သ ၊ န ၊ သော အဓိပ္ပာယ် ၊အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပဒါယီ)
Foreign Minister to lead OIC delegation on Rohingya update trip in Thailand’s South →
One comment on “မာဆက်(KTV) မီးရောင်စုံအောက်က မြန်မာမိန်းခလေး ဘ၀”
peter February 5, 2013 at 11:18 pm	Reply
It’s nothing new asatrend or process in country development same cases happened in Singapore 1950s Malaysia 1960s Thailand 1970-80s Philippine n Indonesia 1090s till today…. Nothing strange to fuck around ….only thing is must know how,to handle their life…… they no need to feel painful or shy for their good job …they must proud of their honest hard earnings…society must accept..this is happening gradually since we see lots of these girls managed to get married have babies in….need to learn lessons from Thai indo Philippine where lots of 1st generation pros managed to uplift their lives to be brothel owners and small business owners…earned n saved good $$$ …so their next generations r out from poverty managed to lead good n comfortable life….